News Archives - Page7of 28 - Update News
အုန်းချိုမွှေးတစ်ဧက တစ်နှစ်သိန်း ၈၀ ကျော်ရရှိနိုင်တဲ့ အုန်းပင် စိုက်နည်း
June 1, 2022 June 1, 2022 Best_admin
အုန်းချိုမွှေးတစ်ဧက တစ်နှစ်သိန်း ၈၀ ကျော်ရရှိနိုင်တဲ့ အုန်းပင် စိုက်နည်း။ အုန်းချိုမွှေးတစ်ဧက တစ်နှစ် သိန်း ၈၀ ကျော်ရရှိနိုင်တယ်။ တစ်လကို ၆ သိန်းကျော် ရပါလိမ့်မယ်။ အုန်းချိုမွှေးက အရည်သောက်အတွက် ဦးစားပေးစိုက်ပျိုးတာဖြစ်တယ်။ ၂နှစ်ခွဲ ၃နှစ်မှာ
မင်္ဂလာဆောင်ချိန်မှာ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဂိမ်းကိုသာ ဂရုတစိုက် ဆော့ကစားနေခဲ့တဲ့ သတို့သား
မင်္ဂလာဆောင်ချိန်မှာ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဂိမ်းကိုသာ ဂရုတစိုက် ဆော့ကစားနေခဲ့တဲ့ သတို့သား။ မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးတိုအတွက် ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးနဲ့ အပျော်ရွှင်ဆုံး အချိန်တခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုသတို့သား gamer အတွက်တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ သတို့သားက ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးသော နေ့ဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာခန်းမအလယ်မှာ
အပေါ်ပိုင်းကိုပုဝါသာပတ်ထားပြီး ညဝတ်ဘောင်းဘီပွဝတ်ကာ ဆိုင်ထဲသို့ စားစရာဝင်ဝယ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
အပေါ်ပိုင်းကိုပုဝါသာပတ်ထားပြီး ညဝတ်ဘောင်းဘီပွဝတ်ကာ ဆိုင်ထဲသို့ စားစရာဝင်ဝယ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အချို့သောအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်းမျဉ်းနဲ့ဥပဒေများ မရှိသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ဟာ ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု သို့မဟုတ် ထိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများပြည်သူသွားရာ
May 31, 2022 June 1, 2022 Best_admin
ရှေးအခါက သီဝိတိုင်း၊အရိဌပုရမြို့မှာ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေသော မင်းတစ်ပါးရှိလေတယ်။ ဘုရားလောင်းမှာ ထိုမင်းရဲ့ မိဖုရားခေါင်ကြီး ဝမ်းဗိုက်မှာဖြစ်ပြီး ဖွားမြင်လာသော် သီဝိမင်းသားလို့နာမည်မှည့်ကြတယ်။ မင်းကြီးရဲ့စစ်သူကြီးမှာလည်း သားတစ်ယောက်ရလာပြီး အဘိပါရကလို့နာမည်တွင်လေတယ်။ သီဝိမင်းသားနဲ့ အဘိပါရကတို့မှာ မိတ်ဆွေများအဖြစ် ကြီးပြင်းလာကြလို့ အသက်(၁၆)နှစ်အရွယ်မှာ တက္ကသိလာပြည်ကိုသွားပြီး အတတ်ပညာတို့ကို
ဦးမောင်ဝိတ် သက်သေထွက်ဆိုအပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိုင်ရှိခိုး
May 31, 2022 May 31, 2022 Best_admin
ဦးမောင်ဝိတ် သက်သေထွက်ဆိုအပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိုင်ရှိခိုး။ အတိုင်ပင်ခံအပေါ် အဂတိစွပ်စွဲချက်အမှုမှာ လုပ်ငန်းရှင်ဦးမောင်ဝိတ် သက်သေထွက်ဆိုအပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိုင်ရှိခိုးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လုပ်ငန်းရှင်ဦးမောင်ဝိတ်က ဒေါ်လာသိန်းချီ ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဂတိစွပ်စွဲချက်အမှု နှစ်ခုကို ဒီနေ့မေလ ၃၁ ရက်မှာ နေပြည်တော်မှာ
ထူးဆန်းစွာ ငါးမိုးတွေရွာသွန်းတဲ့ မြို့လေးတမြို့အကြောင်စ။ တက္ကဆက်က မြို့တစ်မြို့မှာတော့ သာမာန်နဲ့မတူတဲ့ မိုးရွာသွန်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုထူးဆန်းစွာ ရွာတဲ့မိုးမျိုးကို စိတ်ကူးနဲ့တောင်ယဉ်ဖူးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ ဒီမိုးဟာ မုန်းတိုင်းတိုက်နေတုန် းရွာသွန်းခဲ့တဲ့ ငါးမိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ငါးတွေရွာချခဲ့တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းမိုးပါ။
A female patient at the hospital who scared the doctors and ran away. Here isaweird thing for the
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးကို ကျောခိုင်းကာ တော်လှန်ရေးတွင် နည်းပြဖြစ်လာသည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ‘လွယ်လွယ်အရှုံးပေးရင် အကျင့်ပါသွားလိမ့်မယ်’ ချင်းပြည်နယ်တောအုပ်တစ်ခုအတွင်း ရှပ်အင်္ကျီအဖြူ၊ အားကစားဘောင်းဘီအဖြူဝတ်ဆင်ထားသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးက အမျိုးသားတစ်ဦးကို လက်တစ်ဘက်ကချုပ်ကိုင်ရင်း လက်တစ်ဘက်ကလည်မြိုကိုထောက်ကာ ခြေထိုးခံရင်း ကျောဘက်မှသည် ဆွဲလှဲပစ်လိုက်သည်။ ပစ်လဲကျသွားသော အမျိုးသားမှာ ချုပ်ထားသည့်လက်တစ်ဘက်က
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်လိုတဲ့ အချက် (၉) ချက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေတင်ပြ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်လိုတဲ့ အချက် (၉) ချက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေတင်ပြ။ ဗိုလ်ရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (NSPNC) နဲ့၊ နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံမှု့မှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်လိုတဲ့ အချက် (၉) ချက်ကို
The teacher who taught elementary school students to do laundry. Elementary school students are usually the right age to learn
A respectable couple who donated money to prepare food and cancel the wedding
ဟော့ပေါ့အိုးထဲတွင် အသုံပြုးပြီးသား ကွန်ဒုံးကြီးပါလာလို့ ပြသနာ အကြီးအကျယ်တက်ခဲ့ရတဲ့ စားသောက်ဆိုင်
The world’s first human-made western formal dress is made from human lips
“မြင်း”လို လူလား… “ငန်း”လို လူလာ:?